June 2020 - Myitter
ဝမ်းနည်းစရာသတင်းပါ စာရေးဆရာ နွမ်ဂျာသိုင်း ယနေ့နေလည်ကကွယ်လွန်သွားပါပြီ . . . စာရေးဆရာနွမ်ဂျာသိုင်းသည်၂၇-၆-၂၀၂၀ နေ့လည် ၁၂နာရီ၁၅မိနစ်အချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့ပင်လုံဆေးရုံ၌ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားသည့်အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာဆရာနွမ်ဂျာသိုင်းဟာ အသက် ၆၈ နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ် စာရေးဆရာနွမ်ဂျာသိုင်းသည်၂၇-၆-၂၀၂၀ နေ့လည် ၁၂နာရီ၁၅မိနစ်အချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့ပင်လုံဆေးရုံ၌ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားသည့်အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာဆရာနွမ်ဂျာသိုင်းဟာ အသက် ၆၈ နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ် စာရေးဆရာနွမ်ဂျာသိုင်းသည်၂၇-၆-၂၀၂၀ နေ့လည် […]
တက်ကသိုလျကြောငျးသူ ရုပျအလောငျးကို ခကျခဲစှာ သယျဆောငျနိုငျခဲ့ပါပွီ ဇှဲကပငျတောငျပျေါတှငျ ပြောကျဆုံးသှားသညျ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသူကို သဆေုံးလကျြတှရှေိ့ ကရငျပွညျနယျ၊ ဘားအံခရိုငျ၊ ဘားအံမွို့နယျ၊ ဇှဲကပငျတောငျပျေါမှာ ဇှနျ ၂၅ ရကျနေ့ ညနေ ပိုငျးက ပြောကျဆုံးသှားတဲ့ တက်ကသိုလျ ကြောငျးသူ ၁ ဦးကို ဒီနမေ့နကျ သဆေုံးလကျြ ပွနျတှပွေီ့လို့ […]
ကြောငျးသူမလေးအလောငျးကို ကယျဆယျရေးအဖှဲ့တှေ တောငျအောကျဆငျးပွီး သှားဆညျယူနတေဲ့ Live (ရုပျ/သံ) ပြောကျဆုံးနတေဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသူမလေးအလောငျးကို ကယျဆယျရေးအဖှဲ့တှေ တောငျအောကျဆငျးပွီး သှားဆညျယူနတေဲ့ Live (ရုပျ/သံ) ဖွဈစဉျက………….. မနကေ့ရရှိလာသော ဆိုငျကယျသော့တှရှေိ့သညျ့နရောသို့ သခြောတဲ့အဖွတေဈခုရဖို့အတှကျ ယနမေ့နကျ (၂၇.၆.၂၀၂၀) ဘားအံမွို့နယျမီးသတျတပျဖှဲ့ မွနျမာနိုငျငံလူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့ မာဃလူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့တို့ (၃) […]
ဖုန်းဘေလ် ခိုးနေတဲ့ ဖုန်းအော်ပရေတာ ကုမ္ပဏီတွေကို လွှတ်တော်က တရားစွဲတော့မည် . . . ဖုန်းအသုံးပြုသူများ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ငွေဖြတ်တောက်မှုများအတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ရေးရာကော်မတီကတစ်ဆင့် တရားစွဲဆိုရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောသည်။အမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကော်မတီနဲ့ […]
ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပေ မယ့် ဗုဒ္ဓဘာ သာ အပေါ် လေးစား မှု ရှိတဲ့ ဇနီး သည်အကြောင်း ပြောလာ တဲ့ လင်းလင်း ခ ရစ်ယာန်ဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် လေးစားမှုရှိတဲ့ ဇနီးသည်ချစ်သုဝေအကြောင်း ပြောလာတဲ့ လင်းလင်းအဆိုတော် လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ […]
မနေ့ကရရှိလာသော ဆိုင်ကယ်သော့တွေ့ရှိသည့်နေရာသို့ သေချာတဲ့အဖြေတစ်ခုရဖို့အတွက် ယနေ့မနက် (၂၇.၆.၂၀၂၀) ဘားအံမြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ မာဃလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တို့ (၃) ဖွဲ့ဦးစီးပြီး တခြားသော အဖွဲ့များနှင့်ယနေ့ထပ်မံ ပူးပေါင်းရှာဖွေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကအကူအညီတောင်းလို့ Drone အဖွဲ့တွေကလဲ ကူညီရှာဖွေဖို့ ရောက်ရှိလာကြပါပြီး။ သတင်းထူးများရှိခဲ့လျှင်..သိရှိတာနဲ့မှန်ကန်သောသတင်းများသာတင်ပြပေးပါမည်။ ပျောက်ဆုံးနေသောကောင်မလေး၏ဖြစ်စဉ်နှင့်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်စဉ်အကျဉ်း (လူတွေကမသိတော့ သို့လောသို့လောထင်မြင်ယူဆချက်တွေမဖြစ်ကြဖို့ ဒီစာလေးဖတ်ပေးကြပါ) အမည် – […]
ကိုဗစ်ကုသပေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေ အတွက် အတိုင်ပင် ခံ ဂုဏ်ပြု တဲ့ချီးမြှင့်ငွေ နဲ့ အ လွန် ကို အံ့သြစရာကောင်း ပီး ရွံရှာစ ရာဖြစ်ရပ် ထိုက်သော သူတို့ ရကြ ပါစေ ….. နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ကနေပီး COVID-19 ရောဂါကို […]